BAROORTU ORGIGA KA WEYN
Haddaad tiraahdo Boqolka & afar iyo tobanka qur’aankaan aqaan!!! Yaa kaa akhrisanaya
Assalaamu caleykum ,
Qoraalkeygu maanta kuma saabsana jawaab aan cid u jawaabayo, mana jecli in aan qoraalada caadifaddu ku jirto ka naqdiyo, laakiin mowduuceygu waa NASEEXO aan ugu digayo shacbiweynaha reer Puntland.
Waxaan Akhriste rabaa in aan ku tuso sida fitno loo abuuri karo , la isugu aaddin karo karo, hadhowna si sahal ah laguugu gelin karo haddii aadan (analyse) baarid ku sameyn ama aadan lafagurin. Dadbaa waxaa ka dhaadhacsan in shacbiweynaha P/Land si sahal ah loo duwi karo. Dhibaatadii ka dhacday dhulkeenana (dhulkii udugga) waxaa sababay fitno ay dadi abuureen sidey doonaan ha u abuuraane. Halkaa waxaa laga helay galdalool laga soo geli karo dadkeena si beri haddii dhibaato lala maago si sahal ah loogu gudbiyo. Anigoo taa ka faaideysanaya ayay ila noqotay in aan laga aamusin cid walba oo damacda ama isku dayda in khalkhal geliso nabadda iyo horumarka Puntland maanta ka jirta. Qofka reer puntland ahna waxaa wanaagsan haddii uu garto in ay jirto khatar iyo fitno lala maagan yahay dadkiisa in uu walaalihiis u iftiimiyo ugana digo.
Munaafaqadda dadkan lagu hayo weligeed waa jirtay, laakiin waxey si fiican u soo shaac baxday markii C/rashiid Cali Sharmaarke madaxwene loo doortay, waxeyse aad u soo xoogeysatay 13-kii sano ee aan dowlad la’aanta aheyn, haddii aan Soomaali nahayna si naloo fidneeyo waxaa fitnada naloogu soo dhex qariyaa meelaha ay Soomaalidu ka hesho sida suugaanta (heesaha, gabayada, majaajilada(ila qosol) IWM), ama meeshii kale oo macquul ah. marmarka qaarkoodna diinta ayaaba lagu soo gabadaa.
Haddii aan u soo leexdo dulucda qoraalkeyga maanta oo ku saabsan sida ninkan magiciisa ku sheegay C/waaxid uu doonayo in uu ummadda P/land ugu cago jugleeyo, isaga horkeeno , dab uga dhex huriyo, uguna cabsi geliyo wax aan waxba ka jirin. Sheekaba sheekey keentaaye qoraaladeydii hore waxey ku saabsanaayeen in aan ogaado halka C/waaxid salka ku hayo, markii aan meesha bukta taabtayna waa taas oo uu soo burqaday inkastoo xadiisydii naga yaraadeen haddana waxaa soo baxay ujeedada qoraaladiisa oo uu awalba boorka ku qarin jiray, ileyn wixii uurka kaaga jira afkaa kaa xadee. Su’aashuse waxey tahay maxaa ninkan loo arki waayay markii qalalaasaha P/land uu qoyanaa oo dadka qaarkii ay calanwaleynayeen, muxuuse ka tarayaa hadda oo ay lugaheeda isku taagtay waa P/land-ye dadkuna fahmeen dabinka loo qoolayo??????????
Qoraalkiisii ugu dambeeyay ee uu madaaluhu (c/waaxid) soo qoro oo cinwaan khaldan watay waxa uu isku dayay in uu naga dhaadhiciyo sheeko uu isku aad-aadiyay, isagoo hal qabsi ka dhiganaya C/laahi Yuusuf , ileyn markii aad meel maagan tahay meel baa loo sii mareeye WUXUU:
Ku taliyay in madaxdii cinqilaabkii dhicisoobay 1978-dii waday oo ay rabeen in uu noqdo mid aan dhiig ku daadan, ay xabbad dadka la kor tagaan sida ay yeeleen kuwa hadda xaaraanta Muqdisho ku heysta.
Rabay in aan la mucaaradin xukuumaddii Max’ed Siyaad ee dadka jiifka iyo joogaba u diiday.
Rabaa in uu dadka ka dhaadhiciyo in P/land nabadi ka jirin waqtigan xaadirka ah.
Jecelyahay in qodobka lagu muransanyahay ee federaalisamka meesha laga saaro.
Ku faraxsanaan lahaa in dagaaladii p/land ka dhacay oo dadkiisii ka heshiiyay ay dib u soo noqdaan.
Isku deyayaa in Jaamac Cali Jaamac & Cadde Muuse eed kala dhex dhigo.
Rabaa in dadka wada dhashay ee reer P/land iska hor keeno.
Magaalo keliya ku koobay qalalaasihii P/land oo dhan saameeyay.
Rabaa beel ama jilib hoos isu sii xigta in ay is colaadiyaan.
Saaxiibbo ku sheegay kuwii ka dambeeyay dhibaatooyinkii shacbiga P/land ku dhacay, dhiigoodana daadiyay.
Rag xoog badan ku sheegay kuwa soomaaliya ay ka dagi la’dahay, dad liitana ka dhigay siyaasiyiinta caanka ah ee aan qoriga caaraddiisa wax ku dooneyn.
Rabaa in uu dadka ku cabsi geliyo Somaliland baa idinku soo maqan.
Doonayaa in uu kala jaro gobolada iyo degmooyinka ay P/land ka kooban tahay.
Rabaa in Madaxweynaha P/land ka tanaasulo qodobka 19aad oo P/land burburto,18-kii gobolna loo noqdo.
Isku dayayaa in siyaasiyiin reer P/land ah oo shirka joogta iska hor keeno.
Reer P/land ku cabsiinayaa in la leyn (gumaadi) doono.
Rabaa in uu dadka ka dhaadhiciyo in mooryaanta Xamar ay P/land difaacayaan.
Rabaa in shacabka iyo madaxda reer P/land iska hor keeno.
Rabaa in uu naga dhaadhiciyo in uu nin ehel ah yahay (puntlander). laga yaabe in uu ku dhashay, laakiin isagu isu qaatay in uu yahay.
Iyo kowo kale oo badan ma anaa soo wada koobi kara, arimahaasoo dhan waxey iyagoo habeysan ugu jiraan qormadaa aan kor ku soo sheegay.
Akhristow marka wax laguu sheego ayaad wax garataaye, maxaad fahamtay(maxaa kuu baxay)? Maxaa kula gudboon in aad ka yeesho fitnooyinkaa oo kale? Maxaan uga hortagi karnaa xargaha Xamar laga soo maleegayo oo ay dad badani hoggaanka u hayaan?
Arintu C/laahi Yuusuf ka weyne sidee isaga caabinaa khiyaamooyinkaa iyaga ah?
Jawaabtu waa sahal, keliya waa adigoo xarigii la xiraaba dib u fura. sideeeee? Waa adigoo jawaab kulul ka bixiya wixii xumaan iyo fitno ah oo dadkaaga iyo ehelkaaga lala maagan yahay, ugana diga khatar walba oo jirta. Kama wado hadaladan maalaayacniga ah ee ninkani qoray iyo kuwa la halmaala, laakiin waa arin kuwo badan oo XAMAR jooga qabaan.
Waxaan ku soo gabagabeynayaa P/land ha jirto, ha joogto, ha jabo cadawgeeda.
QORAALADII HORE EE FAARAX WARSAME...
Faafin: SomaliTalk Sept 14, 2003